Abriil | 2015 | WEEJIDOW
Archive for Abriil, 2015
War Deg deg ah: Puntland oo maanta ka baxdey Shirkii Garoowe ee maanta iyo Khilaaf Weyn oo soo kala dhex galey Dowlada dhexe iyo Puntland
Abriil 30, 2015
WAAJIDPRESS – 30 APR 2015:
Wararka laga helaayo Magaalada Garoowe ee Gobolka Nugaal, ayaa waxay sheegayan in khilaaf uu ka taagan yahay Shirka Madasha Wadatashiga ee maanta ka furmay Magaaladaasi, Isla markaana markii uu Madaxweyne Xassan furey Shirka oo uu Agendahana ku dhawaaqey ayaa gebi ahaanba Maamul Goboleedka Puntland oo la joogo Xaruntooda ay gebi ahaanba isaga baxeen shirka, balse Shirkii waa uu sii socdey, waxaa Khudbadiisa sii watey Madaxweyne Xassan, waxaa ku xigey oo ka Hadley Madaxweynaha Koonfur Glabeed Shariif Xassan iyo Axmed Madoobe; Shirkii ayaa maantana ku soo gabagaboobey jawi wanaagsan.
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta si rasmi ah Magaalada Garoowe kaga furay Shirka Madasha Wadatashiga, oo wejigiisii 1-aad uu saddex bilood ka hor ka qabsoomay Magaalada Muqdisho.
Maamul Goboleedka Puntland, ayaa ka baxay Shirka Madasha Wadatashiga ee maanta ka furmay Magaalada Garoowe ee Xarunta Maamul Goboleedka Puntland.
Tani, ayaa waxay ka dambeysay markii Madaxwynaha Puntland Cabdi-Welli iyo Maamulka Puntland ay ku adkeysateen in laga hadlo waxa uu salka ku haayo Dhismaha Maamulka Gobolada Dhexe, iyadoo ay Puntland dalbatay in la kala cadeeyo in Gobolka Mudug oo dhami lagu daraayo Gobolka Galgaduud iyo Koonfurta Gobolkaasi lagu daraayo Galgaduud; arintaasina waxaa lugta ku dhuftey Madaxweynaha Federaalka Xassan Sheekh oo si kulul uga diidey Puntland.
Madaxweynaha Federaalka Dowladda Somaliya ayaa shirka ka dhex sheegey in ka doodista Maamulka Gobolada Dhexe dib loo dhigey, hase ahaatee Markii uu sidaasi ku dhawaaqey ayaa Madaxweynaha Puntland CabdiWelli iyo dhamaan Madaxda Maamul Goboleedka Puntland isaga baxeen Madasha Shirka Maanta.
Xildhibaan Saciid Cabdi Samatar (Saciid Surcad) oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland uga qaybgaleysa shirka, ayaa cadeeyay in khilaaf uu ka dhashay tallaabada uu Madaxweyne Xassan uu kaga dhawaaqey kala cadeynta waxa laga yeelayo Gobolka Mudug, bacdamaa Waqooyiga Mudug ay ka arrimiso Puntland; ayuu maanta idaacadaha u sheegey Xildhibaanka.
Sidoo kale waxa uu Madaxweynaha Somaliya uu ku eedeeyay inuu ka meer meeray inuu kala cadeeyo mowqifkiisa ku aadan, Maamulka Gobolada Dhexe.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa furitaanka shirka Cadaado si cad u sheegay in Cadaado Maamul Goboleed loogu soo dhisi doono Gobolada Mudug iyo Galgaduud.
War deg deg ah: TALIYAHA BOLISKA SOOMAALIYA OO LOO MAGACAABEY WASIIRKII HORE EE GAASHAANDHIGA GENERAL MAXAMED SHEEKH XASSAN OO KA SOO JEEDA BEESHA DIGIL IYO MIRIFLE
Shirkooda Khamiislaha ah ayay golaha wasiiradu uga hadleen arrimaha amniga, waxbarashada caafimaadka, ayagoo sidoo kale isku raacay in Sareeyo Guuto General Maxamed Sheekh Xasan Xaamud (OO ka soo jeeda JILIBLE – BEESHA DIGIL IYO MIRIFLE) uu noqdo taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
“Marka golaha wasiirada dood dheer ayey ka yeesheen magacaabista cida buuxin doonta boosaskaasi oo ay golaha wasiirada soo bandhigeen, waxaana runtii cod aqlabiyad leh ay isku raaceen in general Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo aad wada garaneysaan ahaana wasiirkii hore ee gaashindhiga uu buuxin doono Taliyaha Boliska SOOMAALIYA waxaan rajeyneynaa inuu ilaahey u saqiro howshaas; ayuu manta shirka Jaraai’d ku sheegey Afhayeenka Dowlada Ridwaan.
Sidoo kale waxay golaha wasiiradu isku raaceen in taliyaha ciidanka Asluubta loo magacaabo Gen. Bashiir Maxamed Jaamac “Goobe” oo horay u soo noqday taliyaha nabad sugidda qaranka; ayuu isla shirkiisa Jara’id manta ku sheegey Afhayeenka Dowlada Ridwaan.
Magacabista Sareeyo Guuto General Maxamed Sheekh Xaamuud Taliyaha Booliska Soomaaliyeed iyo Taliyaha cusub ee Asluubta General Bashiir goobe ayaa waxay ka dambeysay wadatashiyo dhexmaray Madaxweyne Xassan Sheekh, Gudoomiye Prof. Jawaari iyo Ra’iisal Wasaare Cumar.
KA FAAIDEYSO DAAWO: SHEIKH CABDIRASHIID SHEIKH CALI SUUFI OO FASIRAAYO HADDII ILAAHEEY KU XIRNAATO ARIMAHAAGA OO DHAN WAA HELEYSAA
MUXAADARO KU SAABSAN GEERIDA AMA MOWDKA IYO AAKHIRO DHIBKA JIRA:
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom oo Gobolka Bakool ka wada howlgal ka dhan ah Shabaab
Abriil 29, 2015
WAAJIDPRESS – 29 Apr 2015:
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ayaa Gobolka Bakool waxa ay ka bilaabeen howlgal lagu furaayo wadooyinka soo gala Degmada Xudur ee Gobolka Bakool oo muddo sanad iyo bar xayiraad ay saaran tahay.
Howlgalkaan ayaa wuxuu biloowday labo maalin ka hor, iyadoo shalay ciidamada ay gaareen tuulooyin hoostagga Degmada Xudur ee Gobolka Bakool sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Ciidamada Dowladda waxaa howlgalka ku wehliya kuwa Amisom, waxaana la sheegay inay gaareen ilaa 5-tuulo oo hoostagta Degmada Xudur sida uu sheegay Aadan Cabdi Maxamed oo ka mid masuuliyiinta Degmada Xudur.
Deeganada ay ciidamada gaareen ayuu sheegay in loo sameeyay maamulo cusub si shacabka deeganadaasi ay u helaan adeega Dowladda, iyagana ay wada shaqeyn ula yeeshaan ciidamada ammaanka.
Intii ay ku guda jireen ciidamada howlgalkaan ayaa waxa ay la kulmeen dagaalo kaga imaanayay dhanka Ururka Shabaab, inkastoo aan la xaqiijin karin khasaaraha dhabta ah ee dagaaladaasi ka dhashay.
Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ayaa xalay ku hooyday deegaano 45-KM u jira Degmada Xudur, iyadoo Saraakiisha ay sheegayaan in howlgalka uu sii socon doono, inta laga xaqiijinaayo in la isku furay wadooyinka Degmada Xudur soo gala.
Shabaab ayaa sanad iyo bar waxa go’doon ku hayaan Degmada Xudur oo sahayda Degmadaasi waxaa lagu geyn jiray Diyaarado ciidamada Amisom ay leeyihiin, waxaana aad u adkeyd nolosha dadka Degmadaasi ku nool.
Masuuliyiin ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku sugan Degmada Xudur oo gadaal ka riixaya howlgalkaan iyo sida wadooyinka Shabaabka go’doomiyeen loo furi lahaa.
GUDOOMIYAHA BAARLAMAANKA JUBBA OO LOO DOORTEY NIN DIGIL IYO MIRIFLE AH
WAAJIDPRESS – 28 Apr 2015:
Cabdi Maxamed C/raxmaan ayaa Baarlamaanka Maamulka Boobland ay u doorteen Guddoomiyaha cusub ee Baarlamanka.
Doorashadda ayaa ahayd mid qarsoodi ah,taasi oo Xildhibaanadu ay ku Codaynayeen Sanduuq.
Madaxweynaha Boobland Axmed Madoobe ayaa goob joog ka ah Doorashadda Guddoonka Baarlamanka,taasi oo u dhacday hab laga soo shaqeeyay.
Guddoomiyaha cusub ee Baarlamanka Boobland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa kasoo jeeda DigilMirifle gaar ahaan beesha Yantaar, wuxuuna sheegay inuu gudan doono Waajibadka shaqo ee loo igmaday.
Guddoomiye Ku xigeenka kowaad ee Baarlamanka Boobland ayaa waxaa loo doortay Aadan Khaliif Xaaji Yuusuf oo isna kasoo jeeda Daarood gaar ahaan Beesha Majeerteen, halka Guddoomiye ku xigeenka Labaadna loo doortay Cabdi Baaleey Xuseen oo kasoo jeeda Hawiye/Gaaljecel.
Waxaa muuqda in Halgankii Hogaamiye-yaasha Beelaha Kablalax Daarood ee Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo uu guuleystay kol hadii Beesha Caalamka iyo Dowlada Muqdisho ay ka gadeen Siyaasadoodii ku dhisneyd rabitaanka Kenya iyo Itoobiya.
War deg deg ah: SAWIRO: NICHOLAS KAY IYO BEESHA ABGAAL OO MAANTA SHIRKOODA KU HESHIIYEY IN HAL MAAMUL LOO SUUBIYO GOBOLADA HIIRAAN IYO SHABELAHA DHEXE
Abriil 28, 2015
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa maanta kulan kula qaatay xafiiskiisa Siyaasiyiin, aqoonyahano, haweenka iyo qeybaha bulshada ee Beelaha Abgaal, iyagoo ka wada hadlay arrimaha maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee la filayo in dhowaan la guda galo.
Kulankan oo ay hormuud ka ahaayeen Ra’iisul wasaarayaashii hore ee Soomaaliya Prof. Cali Maxamed Geeddi iyo Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) ayaa waxaa laga wada hadlay arrimaha maamul u sameynta Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan iyo in Gobolka Banaadir uu noqdo Maamul Goboleed.
Arrimaha hoosta laga xariiqay iyo aragtiyada la isku weydaarsaday ayaa waxaa ka mid ahaa sidii loo dar dar gelin lahaa howlaha maamul u sameynta, isla markaana loo dhameystiri lahaa maamulada haray, waxaana la isla gartay in dhamaan dadka deegaanka looga qeyb geliyo, awood awood qeybsi ku saleysan caddaalad iyo dib u heshiisiin waarta.
Mr Nicholas Kay ayaa u sheegay xubnahan uu la kulmay in fikir ahaan uu qabo in la is raacsiiyoHiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, isla markaana Gobolka Banaadir maqaam gaar oo laga tashato uu yeesho.
Mas’uuliyiinta la kulmay Nicholas Kay ayaa sheegay in bulshada deegaanka ay diyaar yihiin oo ay waqti badan ku bixinayaan dib u heshiisiinta iyo maamul u sameynta.
War deg deg ah: Xoogag hubeysan oo weeraray Xarunta Maamulka Degmada Wajeer ee dalka Kenya
Xoogag hubeysan oo lala xiriirinayo Ururka Al Shabaab, ayaa gelinkii dambe ee maanta weerar ku qaaday Xarunta Degmada Wajeer ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya.
Xoogagan, ayaa waxa uu ujeedkoodu ahaa inay xoog ku galaan Xafiiska Gudoomiyaha Degmada Wajeer Ahmed Abdullahi, hase ahaatee waxay iska caabin xoogan kala kulmeen Ciidanka Ilaalada Gudoomiyaha.
Taliyaha Ciidanka Booliska Kenya General Joseph Boinet oo shir jaraa’id qabtay, ayaa wuxuu sheegay in weerarkaasi ay soo qaadeen saddex nin oo ka tirsan Ururka Al Shabaab, sida uu yiri.
Taliyuhu waxa kaloo uu sheegay in gacanta lagu dhigay mid ka mid ah saddexdaasi nin, isla-markaana ay Booliska Wajeer baadi-goobayan labadii kale ee la socotay, kuwaa oo sida uu sheegay baxsaday.
General Joseph Boinet, ayaa qeexay in Ciidanka Booliska ay horey u baadi-goobayen saddexdaasi nin, ka hor intii aynaan maanta geysan weerarka ka dhanka ah Xafiiska Gudoomiyaha Degmada, sida uu yiri.
General Joseph Boinet, ayaa sidoo kale sheegay in raggaasi ay maleygayen weerar weyn oo ay ka geystan Degmadaasi, laakiin ay Ciidanka Boolisku ka hortaggeen.
Dhacdadan oo saamayn ku yeelatay dadka ku dhaqan Degmada Wajeer, ayaa waxaa hadalhaysa bulshada deegaanka, kuwaa oo isla dhex maraaya in weerar culus lala damacsanaa Xarunta Maamulka, balse la fashiliyay.
Madaxweynaha dalka oo gaaray Garoowe- “DAAWO SAWIRRO”
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wefdi balaaran oo uu hogaaminaayo, oo ka mid Wasiirka Dastuurka Dr. Xuseen Sheikh Xuseen (oo ka soo jeeda Beesha DABARRE – Digil & Mirfle) iyo Wasiirka Cadaalada Ilkajiir (oo ka soo jeeda beesha Warsengeli- Daarood) ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali “Gaas” iyo boqollaal dadweyne ayaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Xassan ayaa idaacadaha u sheegey in ujeedka safarkiisa ay tahay wadatashi iyo in uu wax ka ogaado xaalada nololeed ee shacabka goboladaan; ayuu yiri.
War deg deg ah: Qarax Waxyeelo Geystay oo Ka Dhacay Gaalkacyo ee Puntland (Sawirro)
Labo ruux oo la sheegay inay ahaayeen haween ayaa ku dhaawacmay qarax lugu xiray gaari oo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo,sida uu sheegay sarkaal booliska ka tirsan.
Qaraxan waxaa lugu xiray gaari uu watay Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo ah madaxa hay’adda Nordic international Support oo Gaalkacyo ka hirgalisay nalalka ku shaqeeya cadceedda.
Ma jirto wax khasaare ah oo soo gaaray sarkaalka gaarigiisa u qarxay,sida uu sheegay qof goob-jooge ku sugnaa goobta qarax.
“Gaariga waxuu ku qarxay meel wax yar u jirta Idaacadda Radio Gaalkacyo,waxuuna dhacay markii uu gaariga ka dagay Dhabancad,labo gabdhood oo meesha maraysay ayaana ku dhaawacantay,”ayuu yiri Maxamed Cismaan oo ku dhawaa meesha uu qaraxa ka dhacay.
Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay,mana jirto wali wax war ah oo ka soobaxay,balse waxaa la sheegay inay baarayaan sida uu qaraxan u dhacay.
Sawirro laga soo qaaday gaariga la qarxiyay ayaa muujinayay bur bur soo gaaray,waxaana warar horu-dhac ah ay sheegeen in bambada lugu xiray kursiga qaybta darawalka oo ahaa halka uu sarna inta uusan ka degin sarkaalka lalal damacsanaa.
DAAWO SAWIRADA HOOS:
DAAWO: XILDHIBAANADA FEDERAALKA OO SI KULUL UGA SOO HORJEESTEY SIDII MAAMULKA JUBBA UU XILDHIBAANADA U QEYBIYEY
WARSAXAAFADEEDKA WAXAA AKHRINAYA XILDHIBAAN Dr. MAXAMED SHEEKH DAAHIR OO KA SOO JEEDA BEESHA DIGIL IYO MIRIFLE: DAAWO:
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Abriil, 2015.